Nezvedu - Nanchang Fontainebleau Painting Zvishandiso Industrial Co, Ltd.
Ndinovimba munhu wese anogona kuwana yakanakisa brashi kubva kuGolden Maple.
Nanchang Fontainebleau Painting Materials Industrial Co, ltd inogadzira kugadzirwa uye kutengesa kwebrushes mabhurashi, ayo anosanganisira watercolor / mafuta / acrylic / ekushongedza mabhurashi uye erunako mabhurasho. Ivo vane yavo brand- Goridhe Maple, yanga ichizivikanwa seimwe yeakanakisa emhizha pendi brashi brand muChina. Ivo vanopa ese ese maOEM sevhisi, zvakare inogona kukubatsira iwe kugadzira yako pachako brashi uye brand. Kunyangwe iwe uine data rebrashi, ipapo ivo vanogona kuigadzira, zvinoenderana nechikumbiro chako chekugadzira mabhurashi mazhinji akasiyana. Ivo vaive nerubatsiro mutengi kugadzira akawanda anozivikanwa marangi pamusoro pasirese.
Iyi imhuri yemhuri ine nzira yakare yekugadzira mabhurashi.Muna 2008, Golden Maple Artist brushes yakapayona nzira yavo yekutengesa kune dzimwe nyika. Iye zvino Goridhe Maple yebrashi brashe yakagamuchirwa zvakanaka muChina.
inova imwe yeakakura-gadzira muChina, uye yakagamuchira rumbidzo yakawedzera kubva kuvanyori vane mukurumbira vekunze. Pamusoro pefekitori yavo, yakanga yamhanya pamusoro pemakore makumi matatu, ine ruzivo rwakawandisa mukugadzirwa kweapendi bhurashi. Ese akagadzirwa kunze kwemaoko, mushure mekunge bhurashi yapera, ichave neyakaomarara mhando kutonga. Kugadzira mabhurashi ari nani, fekitori zvakare tenga akawanda epamberi michina
Ivo vakaunganidza vane mukurumbira maartist uye ehunyanzvi zvinhu zvehunyanzvi pamwechete, nechinangwa chekugadzira yemhando yepamusoro, yakasarudzika, yakakurumbira mabhurashi kune akatsanangurwa maartist Iye anogara achitenda kuti nekutarisa pahunhu uye kukosha, zvino zvigadzirwa zvake zvaizove nemakwikwi akasimba kupokana nezvimwe zvigadzirwa. Ivo vakazvipira kune hunyanzvi hweye wakanaka muimbi uye nekuvapa ivo nenzira nyowani dzekuongorora kugona kwavo, vachivabvumidza kugovana basa ravo nenharaunda yepasirese. Ivo vanogamuchira mazano matsva, vanotsvaga ruzivo rwechizvino-zvino uye zvigadzirwa - vanopa nguva yavo kugadzira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvepasirese, izvo zvinoshandiswa nevamwe vevanyori venyika.
Inowanikwa mudunhu reJiangxi, guta reWengang, inova ndiyo nyika yekare kwazvo yebrashi muChina ine nhoroondo yemakore anopfuura 1600
- Nanchang Fontainebleau Painting Zvishandiso Industrial Co, Ltd ..
Inowanikwa mudunhu reJiangxi, guta reWengang, inova ndiyo nyika yekare kwazvo yebrashi muChina ine nhoroondo yemakore anopfuura 1600.
Wengang anokudzwa seguta rekumusha kweChinese mabhurashi kubvira 2004.
Kana iri kambani yedu, isu tine anopfuura makore makumi matatu ezviitiko ekugadzira akawanda akasiyana marudzi dhizaini muartist pendi bhurashi, isu tanga tagadzira akawanda anopisa kutengesa brashi kune vatengi vedu.
Kunze kwesable, yakakosha mvere dzemhuka, Mamwe ese mabrashi ane yemahara sampuro.
Rutsigiro Rune Simba
Ndarama Maple diki odha yakawanda inotsigirwa, logo mutengo ndeimwe nguva kubhadharisa.
Ese mameseji anopindurwa mukati me24hours panguva yekushanda zuva.